chikamu: Rovedza Kufamba Sweden
musha > Rovedza Kufamba Sweden
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Europe, nyika kubwinya uye rengano yakanaka urwu, vanoenda-kuti rwendo mumwe yokufamba Zvokutopenga kunze uko. With risingaperi kushamiswa chisinga- nzvimbo kushanya, Europe inozivikanwa kuva imwe yeakanaka kunze kwenyika ekudzidzira hubs evadzidzi veInternational sevane…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Nyika European rudo mazororo enyika zvavo - kunyanya avo kuti vaone yakawanda revashanyi. Uri kuronga kuona rimwe munyika idzi panguva mazororo enyika yavo? kana zvakadaro, pane nzira dzakawanda kubatana Kupemberera! Iwe zvakare uchave nemukana wakanaka kwazvo…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi 2018 Dzava apera, chinogona kureva chete kuti Krisimasi pedo! Vanhu vachiri haana kugadzirira kuti, asi kune vafambi, zviri kumusoro nguva kuronga rwendo. Kana uri kutsvaka guta zvakanaka kupedza Christmas mu, tine…